I-iPhone Xs, i-iPhone Xs iMax kunye ne-iPhone Xr, konke malunga nento entsha evela kuApple | Iindaba zeGajethi
I-iPhone Xs, i-iPhone Xs iMax kunye ne-iPhone Xr, konke malunga nezixhobo ezitsha ze-Apple
I-Apple ibhiyozele i-Keynote yayo ethandwayo yonyaka, apho ibhengeza iitheminali zayo ezintsha kwaye isikhokele kancinci malunga nento eza kubonakala kwintengiso ngexesha lonyaka liphela nakuninzi olulandelayo. Ezi ziimpawu, amaxabiso kunye nokufumaneka kweApple iPhone Xs, iPhone Xs Max kunye ne-iPhone Xr. Siza kukubonisa yonke into ekufuneka uyazi malunga nezi terminals, kubandakanya nohlobo olutsha lwe-iPhone "enexabiso eliphantsi" ekhutshwe yiApple kwaye enethuba elihle lokuba yimpumelelo kwintengiso.
1 I-iPhone XS kunye ne-iPhone Xs Max: Yonke into ekufuneka uyazi
1.1 Uphuculo olukhulu lwekhamera kwaye akukho nto intsha kwiscreen
1.2 Isandi sestiriyo esimanzi kunye nokubanakho kweSIM ezimbini
1.3 Ixabiso kunye nokufumaneka
2 I-iPhone Xr: Yonke into ekufuneka uyazi
2.1 Isikrini kunye nekhamera, umahluko omkhulu
2.2 Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-iPhone Xr
I-iPhone XS kunye ne-iPhone Xs Max: Yonke into ekufuneka uyazi
Ngoku i-iPhone inamandla ngakumbi kunangaphambili, iprosesa yintliziyo yesixhobo, ke ii-iPhone Xs kuzo zombini ezi nguqulelo ziguqukela I-A12 Bionic 7 nanometer (ezisibhozo ezingundoqo). Ngokuchanekileyo imodeli efanayo eya kubandakanya umntakwabo omdala i-iPhone Xs Plus. Ukongeza, enkosi kule processor intsha ye-7 ye-nanometer (eyokuqala yohlobo lwayo), inkampani yaseCupertino ithembisa iziphumo zokuzimela ngokucacileyo ezingaphezulu kwezo zabandulelayo. ii-iPhone Xs zibonelela ubuncinci (kwithiyori) isiqingatha seyure ngaphezulu kokusebenzisa kunye nescreen kune-X X yangoku, kwaye i-iPhone Xs Max iya kunikezela 1h 30m inde kune-iPhone X yangoku.
Inkqubo: I-A12 Bionic 64-bit kunye neNjini yeNeural
Memoria I-RAM: 3 GB (iya kumiselwa)
Ukugcina: I-64 GB / 256 GB / 512 GB
Ukuxhuma: I-LTE, i-WiFi 802.11 ac MIMO, iBluetooth 5.0, NFC
Ibhetri: Ukutshaja ngokukhawuleza kunye nokutshaja kwe-Qi ngaphandle kwamacingo
Ukhuseleko: I-ID yobuso
Uphuculo olukhulu lwekhamera kwaye akukho nto intsha kwiscreen
Ngoku sinee-12 MP sensors ezibonelela ngozinzo lokujonga kunye nokuvula f / 1.4 ephezulu kunye f / 1.8 kwezantsi. Into efanayo iyenzeka iikhamera zangaphambili, iphuculwe kancinci, nangona isemi njalo yi-7 MP kuphela ene-f / 2.2.
Nangona kunjalo, bakhethe ukuphucula ngokusebenzisa isoftware enje Smart HDRImowudi yemizobo enobuchule obunzulu ngakumbi kunye nenkqubo yokuvula ngasemva ngokupheleleyo. Kwinqanaba lokufota, kodwa kwinqanaba lokurekhoda sifumanisa ukuba i-iPhone sifumana ukongezwa kwee-microphone ezine eziya kuthi zivumele ukurekhoda iaudiyo kwistereo esinokuphinda senziwe kwakhona, into eya kuthi inike umgangatho omkhulu wokuva ukurekhodwa Senza nee-Xs zethu okanye ii-Xs Max, Hi ndlela leyi, zombini ezi zixhobo zinekhamera efanayo.
Isikrini se-X Xs: 5,8 Inch Super Retina OLED-Resolution 2.436 x 1.125 pixels, 458 PPI
Iscreen se-IPhone Xs: 6,5 ″ Super Retina OLED - 2.688 x 1.242 isisombululo sepikseli, 458 PPI
Ikhamera ephambili: I-12 kunye ne-12 MP ye-sensor ezimbini ezinekona ebanzi kunye nelensi yefowuni, ukuvula f / 1.8 kunye f / 2.4 ngokwahlukeneyo kunye nokuzinzisa kokubonakalayo okubonakalayo. Ukurekhodwa kwe-4K kwi-24/30/60 FPS, kwi-4-LED yeTone yeNyaniso.
Ikhamera yangaphambili: Ubunzulu bokwenyani be-7 MP, f / 2.2, kunye neRetina Flash, kunye nokurekhodwa okupheleleyo kwe-HD.
Ngokwenxalenye yayo, isikrini esiqhubeka nokubonelela nge- Iphaneli ye-Samsung OLED enetekhnoloji ye-Tone yokwenyani yendalo. Sinezisombululo ezingama-2.436 x 1.125 zeepikseli ezibonelela ngama-458 e-PPI eemodeli ezingama-5,8 resolution kunye nesisombululo sama-pixels angama-2.688 x 1.242 anikezela ngokufanayo ama-458 e-PPI kwimodeli enkulu kune-6,5 ″. Kwaye konke oku kwinqanaba lesikrini, liyahambelana nazo zonke iinguqulelo ze-HDR ezinje nge-HDR10 kunye neDolby Vision.
Isandi sestiriyo esimanzi kunye nokubanakho kweSIM ezimbini
Inkampani yaseCupertino ibeke ngoku izithethi ezibini ezinamandla ngakumbi ezibekwe ngcono kwisandi sestereo ukwenza isitayile sokuntywila, kwaye bekukho bambalwa abasebenzisi abakhalaze malunga nomgangatho "ophantsi" wesandi se stereo kwi-iPhone X yangaphambili. Ngoku ezi ngxaki zisonjululwe.
Kwelinye icala, inkqubo yesibini ye-SIM ikhutshiwe Oko kuyasivumela ukuba sibandakanye iSIM khadi enye kwifomathi ebonakalayo ngelixa sinokusebenzisa enye kwifomathi ye-eSIM. Nangona kunjalo, ingxelo ehambelana ngokupheleleyo namakhadi amabini e-MicroSIM aya kuthengiswa kuphela e-China. Ngelishwa, itekhnoloji ye-eSIM ayikasasazeki. Nangona kunjalo, u-Apple ubanga ukuba unelungelo elilodwa lomenzi wenkqubo yolawulo lwe-SIM eya kuthi ibone kwangaphambili ukuba ibhetri inokuhambisa ngenxa yeemeko zokusetyenziswa kwedatha kunye nokugubungela.
Isiphelo sendlela Ungaqala ukubhukisha ukusuka nge-14 ezayo kaSeptemba, kwaye uya kufumaneka kwinani elifanelekileyo leemarike ezibandakanya iSpain ukusukela nge-21 kaSeptemba ukuqokelela.
i-iPhone Xs I-64 GB ukusuka kwi-1159 euro
I-iPhone Xs 256 GB ukusuka kwi-1329 euro
I-iPhone Xs 512 GB ukusuka kwi-1559 euro
I-iPhone Xs Max I-64 GB ukusuka kwi-1259 euro
I-iPhone Xs Max 256 GB ukusuka kwi-1429 euro
I-iPhone Xs Max 512 GB ukusuka kwi-1659 ye-euro
I-iPhone Xr: Yonke into ekufuneka uyazi
Le yi-iPhone X entsha "enexabiso eliphantsi" esungulwe yi-Apple. Yabelana nabantakwabo abadala iprosesa ye-A12 Bionic, eyona inamandla kwintengiso kwaye yenziwe kwii-nanometer ezisixhenxe. Yazisa njalo umfanekiso wescreen sonke, itekhnoloji ye-ID yobuso kwaye ngokuqinisekileyo iyashiya iqhosha lasekhaya kunye nesifundi seminwe. Nangona kunjalo, I-Apple isike imiba enjengekhamera kunye nescreen ukulungelelanisa ixabiso kangangoko kunokwenzeka.
Inkqubo: A12 Bionic
Memoria I-RAM: I-3 GB (iya kuqinisekiswa)
Ukugcina: I-64 GB / 128 GB / 256 GB
Ukuxhuma: I-WiFi, iBluetooth 5.0, LTE kunye ne-NFC, iSIM ezimbini
Ubungakanani: Ubukhulu: 150 x 75,7 x 8,3 mm
Ubunzima: I-194 gram
Izixhobo: IAluminiyam kunye neglasi
Ngenxalenye yalo Isakhelo sesiphelo senziwe ngeAluminium 7000 Ngelixa umva uyiglasi kwakhona, ngenkangeleko iphantse yafana ne-iPhone 8 ngasemva.
Isikrini kunye nekhamera, umahluko omkhulu
Ngoku bakhetha i Iphaneli ye-LCD ye-intshi eyi-6,1 Ulwelo lweRetina, ukushiya iteknoloji ye-3D yokuChukumisa kodwa ukuphucula imeko yokuhlaziya inzwa ye-capacitive ukuya kwi-120 Hz.
Isikrini: 6,1 intshi kwi-1.792 x 828 isisombululo sepikseli kunye ne-326 PPI density
Ikhamera ephambili: MP eyi-12 ene-f / 1.8 ukuvula kunye neTone yeNyaniso enee-LEDs ezine
Ikhamera yeselfie: Ukuvulwa kwe-7 MP f / 2.2 ngenkqubo yoBunzulu bokwenyani
Ikhamera yenye indawo apho iApple ikwazile ukubeka isikere, sifumana inzwa enye ye MP eyi-12 ene-f / 1.8 kunye neTone yeNyaniso enee-LEDs ezine. Kwelinye icala, umphambili unayo Ukuvulwa kwe-7 MP f / 2.2 kunye ukubonelela ngenkxaso yemowudi yemizobo ngenxa yemizwa Ubunzulu bokwenyani. Oko kukuthi, kuzo zombini iikhamera sinemowudi yePortrait kunye nazo zonke izinto ze-iPhone yamva nje.
Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-iPhone Xr
I-iPhone Xr iya kufumaneka ukusuka nge-26 ka-Okthobha, ukuvumela ukugcinwa okufanayo ngo-Okthobha 19 kula maxabiso alandelayo:
I-iPhone Xr nge 64 GB kusuka 859 euro
I-iPhone Xr nge 128 GB kusuka 919 euro
I-iPhone Xr nge 256 GB kusuka 1.029 euro
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-iPhone Xs, i-iPhone Xs iMax kunye ne-iPhone Xr, konke malunga nezixhobo ezitsha ze-Apple
Uvavanyo lweemoto ezilawulwa ngonomathotholo iXinleHong 4 4x9125
I-Apple Watch Series 4 sele isemthethweni: Yazi zonke iindaba zabo